2018-02-15 | तीतोपाटी डट कम
तोपाटी डट कम - एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एमाले र माओवादीले विहीबार नै राष्ट्रपति समक्ष समर्थनको पत्र बुझाएका थिए ।
राज्यको दोहन कति गर्छन् यी पूर्वराष्ट्रपति ? फेरि ४० लाखको अर्को गाडी किनिँदै…
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका लागि ४० लाखमा अर्को नयाँ गाडी किन्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई एउटा नयाँ गाडी यसअघि नै उपलब्ध गराएको थियो । तर, उनलाई पुनः अर्को गाडी आवश्यक परेको भन्दै गृह मन्त्रालयले ४० लाखमा स्कोरपियो गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । अब पूर्वराष्ट्रपति यादवले दुई वटा गाडी प्रयोग गर्ने भएका छन् ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई थप अर्को एक गाडी दिने निर्णय गरेकाले उनका लागि गाडी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी गृह मन्त्रालय सवारी शाखाका उपसचिव यदुनाथ पौडेलले दिए । पौडेलका अनुसार पूर्वराष्ट्रपतिका लागि थप गाडी किन्न अर्थ मन्त्रालयले ४० लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालयलाई निकासा गरिसकेको छ र रकम प्राप्त भई खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
सरकारले केही समयअघि मात्रै पूर्वराष्ट्रपति यादवको घर भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । घरभाडाबापत बढीमा दुई लाखसम्म दिन सकिने निर्णय सरकारले गरेको थियो तर पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई घर भाडावापत ६० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई मासिक ५० हजार भत्ता दिँदै आएको छ भने सवारी साधन मर्मत सम्भारवापत मासिक २५ हजार दिँदै आएको छ । यसैगरी, उनलाई मन्त्रीसरह इन्धन सुविधा दिने गरिएको छ भने निजी सचिवालयमा उपसचिवस्तरको एक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी राख्दै उनीहरूलाई तलब खुवाउँदै आएको छ ।
यसैगरी, यादवलाई पत्रपत्रिकाबापत मासिक ३ हजार दिइने गरेको छ भने खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेट र बिजुलीको पैसा बिल अनुसार सरकारले नै भुक्तानी दिने गरेको छ । कार्यालयका लागि एउटा मोटरसाइकल पनि दिइने भएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिका निजी सचिव किरण पन्थीले पूर्वराष्ट्रपतिको कार्यक्रमलाई सहज बनाउन अर्को एक गाडी माग गरिएको र सो अनुसार सरकारले गाडी दिने निर्णय गरेको बताए । पूर्वराष्ट्रपतिका अतिथि र पाहुना आउँदा कतिपय अवस्थामा ल्याउन र पुर्‍याउन जानुपर्ने अवस्था भएकाले अर्को गाडी आवश्यक परेको जानकारी यादवका निजी सचिव पन्थीले दिए ।
कहिलेकाहीं निजी सचिवालयले पनि पूर्वराष्ट्रपतिका विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सचिवालयका लागि पनि गाडी आवश्यक पर्नु स्वाभाविक भएको पन्थीले बताएको खबर बिहीबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।